Mpandresy ny andiany faha-8 amin'ny PortalProgramas Awards 2016 | Avy amin'ny Linux
Mpandresy amin'ny andiany faha-8 an'ny PortalProgramas Awards 2016
Luigys toro | | Avy amin'ny Linux, GNU / Linux, About us
Omaly izy ireo dia nifandray taminay avy Observatory teknolojia an'ny PortalProgramas, handefa anay ny valin'ny andiany faha-8 an'ny loka nomen'ny Free Software an'ny tranonkala voalaza.
Feno fankasitrahana ireo mpamaky ny bilaoginay izahay, satria FromLinux no nahazo ny toerana voalohany tao amin'ny sokajy Best Free Software Software Blog. Marihina fa ny safidin'ny mpamaky dia zava-dehibe amin'ny fifidianana.
Manararaotra manao izany izahay fantaro ny asan'ny tonian-dahatsoratra, mpiara-miasa ary mpandrindra tsirairay, izay efa an-taona maro no nahatonga ny DesdeLinux bilaogy fanovozan-kevitra ho an'ireo vaovao sy manam-pahaizana momba ny lozisialy maimaimpoana.
Toy izany koa no ananananay fanasana misokatra, mba hitokianareo hatrany ny asa efa nataonay ary amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa dia manampia anay hanohy ny fanaovana avy amin'ny FromLinux ilay bilaogy tianao be.
Ireto ny valin'ny valin'ny mari-pankasitrahana portalprogramas:
1 BLOG SOFTWARE MAIMAIMPOANA INDRINDRA Ao amin'ny PROGRAM PORTAL
2 POTENTIANA LEHIBE INDRINDRA NY fitomboana
3 SOFTWARE MAIMAIMPOANA AN'NY MOBILE
4 SOFTWARE MAIMAIM-POANA REVOLUTIONARY
5 Zava-dehibe amin'ny fifandraisana
6 ZAVATRA MOMBA NY BUSINESSES
BLOG SOFTWARE MAIMAIMPOANA INDRINDRA Ao amin'ny PROGRAM PORTAL
Toerana 1: Avy amin'ny Linux
Toerana faha-2: KDE Blog
Toerana 3: Rindrambaiko Livre Brasília-DF
POTENTIANA LEHIBE INDRINDRA NY fitomboana
Toerana 1: Robotika Icaro
Toerana faha-2: LinuxAE, Masinina virtoaly GNU / Linux.
Toerana 3: gvSIG Desktop.
SOFTWARE MAIMAIMPOANA AN'NY MOBILE
Toerana 1: Geopaparazzi
Toerana faha-2: KDE Connect
Toerana 3: Bitmask.
SOFTWARE MAIMAIM-POANA REVOLUTIONARY
Toerana 1: gvSIG Desktop
Toerana faha-2: GNU Health
Toerana 3: GNU canaima
Zava-dehibe amin'ny fifandraisana
Toerana 1: WordPress
Toerana faha-2: GNU canaima.
Toerana 3: Chamilo LMS.
ZAVATRA MOMBA NY BUSINESSES
Toerana 1: LibreOffice
Toerana faha-2: InvoiceScripts.
Ny mpitsara amin'ity fotoana ity dia natambatra Noel Rodríguez Freire - Filohan'ny Fikambanana LiGNUx Fanabeazana, David Santo Orcero - Doctor ny injeniera momba ny informatika sy ny injeniera momba ny indostria ary David hine gomez - injenieran'ny informatika.
rehetra fikajiana hanakambana ny safidin'ny mpampiasa amin'ny fifidianana ny mpitsara efa nataon'i Francisco Iglesias - Nahazo diplaoma tamin'ny statistika miaraka amin'ny mari-pahaizana Master amin'ny famakafakana angon-drakitra marobe. MEY ampidino ny takelaka Calc miaraka amin'ireo data rehetra novokarin'i Francisco sy nampiasainy ho an'ny kajy nataony.
Indray mandeha indray, misaotra anao rehetra ary milaza aminao fa mpandresy koa ianao amin'ny Best Blogger Software Free 2016, satria ianao koa anisan'ny DesdeLinux.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Avy amin'ny Linux » Mpandresy amin'ny andiany faha-8 an'ny PortalProgramas Awards 2016
Miarahaba anao avy amin'ny Linux !!! Vao tsy ela akory aho no tonga tany aminao ary ny marina dia mamoaka lahatsoratra tena tsara ry zareo! Mandrosoa, arahaba !!
Misaotra betsaka ary manantena izahay fa hanohy handroso miaraka amin'ireo lahatsoratra bebe kokoa sy tsara kokoa.
Alex White dia hoy izy:
Miarahaba anao, fa ho ahy ity bilaogy ity dia taona vitsivitsy miala amin'ny taloha.
Toa mampametra-panontaniana ahy ny kalitaon'ny lahatsoratra, ny sasany tsy miresaka momba Linux akory…. Ny sasany amin'izy ireo dia mety hilaza mihitsy fa notohanan'izy ireo.
Ny ekipan'ny mpandika teninao sy ny kopia ary apetaho amin'ny tranokala hafa dia manana asa bebe kokoa isan'andro.
Ny ekipan'ny mpandamina hevitrao dia mety hampihena ny hevitro. Tsy maintsy hampiakatra ny karamany ianao satria hiteny aho fa misy vitsivitsy ny fanehoan-kevitra toa ahy.
Maty ny tranokalanao. Manana fampisehoana mahatsiravina izy io. Saingy mbola voavahanao ity teboka ity satria rehefa afaka volana vitsivitsy tsy nidiranao ny tranonkalanao dia toa milanja tsara izany.
Na izany na tsy izany. Nandresy ianao, eny. Fa ho ahy dia tsy tokony hotendrena akory ianao handray ny loka.
Miarahaba ary manandrama mitsikera amin'ny hevitro.
Valiny tamin'i Alex Blanco
Misaotra betsaka noho ny fiarahabana anao ary koa amin'ny tsikera an-karihary.
Betsaka ny zavatra niseho tao amin'ny DesdeLinux tato ho ato, ny mpitantana vaovao, ny mpizara vaovao, ny fomba fijery vaovao, ny mpampiasa vaovao ary koa ny tonian-dahatsoratra vaovao. Ny mijanona tsy miova ary antenaina fa tsy hiova mihitsy, dia ny faniriana hampahafantatra amin'ny alàlan'ny rindrambaiko maimaimpoana ary hanome ny fahalalantsika hamerina kely, ny vola nomen'ny fiarahamonina anay.
Niasa mafy izahay hatramin'ny nitantananay ny DesdeLinux mba hitazomany ny laharan'ny famoahana azy ary ambonin'izany rehetra izany mba hankafizan'ny mpampiasa hatrany ny fitaovana natao ho azy ireo. Ny ekipanay dia natsangana ho Professionals Free Software ary koa niara-namory olona izay niara-niasa tamin'ny DesdeLinux ary ankehitriny izay mahatsapa fa fotoana mety izao hanohizan'izany.
Nitombo ny kalitaon'ny lahatsoratra, nanao hadisoana vitsivitsy izahay, saingy tsy takona afenina amin'ny olon-drehetra fa nisy ny fepetra noraisina mba tsy hiverenan'izy ireo intsony.
Ny fanaraha-maso ny fanehoan-kevitra dia nitovy tamin'ny teo aloha ihany, fa raha ny tena marina dia vitsy ny tsy mahafantatra ny ezaka atao na amin'inona na amin'inona ka ny Blog dia mitohy ho benchmark amin'ny rindrambaiko maimaimpoana.
Nohatsarainay tsara ny zava-bitan'ny tranonkala, ampitomboina ny fampiasana ary koa atolotray ny fanatsarana mba hahafahan'ny mpampiasa rehetra miditra kokoa. Antenaina amin'ny ho avy, afaka manohy mamaky avy aminao izahay, ireo tolo-kevitra mba hitoeran'ny toerana amin'ny toerana mety indrindra.
Tsy nandresy izahay, ny vondrom-piarahamonina manohana anay ary nanohana ny DesdeLinux nandritra ny taona maro dia nandresy. Angamba maro amin'ireo zavatra tsy mahomby ankehitriny no ahitsy atsy ho atsy.
Manasa anao izahay mba ho anisan'ny vahaolana ary amin'ny fomba mazava sy mangarahara, azonao atao ny manome ny fahalalanao, ny hevitrao ary ny fahaizanao miresaka, mba ho DesdeLinux no tranonkala tadiavinay rehetra.
Izahay dia mitazona ny filozofia an'ny Free Software sy ny tsikera sy ny fanehoan-kevitra omen'ny mpampiasa anay, izay misolo tena anay teboka manandanja amin'ny fanatsarana ity fiarahamonina ity.
Fantatsika sy fantatsika fa nisy hadisoana nataontsika, saingy miasa am-pahatsorana izahay mba hahafahan'ny DesdeLinux indray no Blog izay
tianao be ilay izy. Manantena izahay fa hatoky anao koa izahay fa hahatratra an'io.
hangalatra dia hoy izy:
Raha ny fahitako azy, rehefa natao ny fanovana tompona dia nihena ny bilaogy, indrindra noho ny resaka plagiarism. Fa nanomboka teo dia nihatsara ny zava-drehetra ary nanomboka teo ny tena marina dia nihatsara ny hira. Miarahaba anao amin'ny fankasitrahana ary manantena aho fa hivoatra hatrany.
Valiny tamin'i Roben
Misaotra betsaka antsika HO2Gi mahatoky
josè fernàndez dia hoy izy:
Tena tsara ny tranokala ary miandry vaovao aho! Misaotra anao. Josè Fernàndez.
Mamaly an'i josè fernàndez
Misaotra betsaka, mandroso izahay.
Ry Luigys malala, miarahaba antsika rehetra ao amin'ny DesdeLinux miaraka amin'ny fahazoana ny Portalprogramas Award amin'ny sokajy Free Software.
Fiarahabana sy fahombiazana
Ity loka ity dia anao koa, misaotra betsaka anao nanampy tamin'ny famoronana fitaovana tsara toy izany ... Vaky be ianao
Gaspar Fernandez dia hoy izy:
Miarahaba anao !! Izany dia satria vavahadin-tserasera ianao ho an'ny ankamaroanay Linuxeros sy GNULinuxeros 🙂
Valiny tamin'i Gaspar Fernández
Ary manantena izahay fa hijanona mandritra ny fotoana maharitra. Misaotra betsaka anao niarahaba anao!
Rafael Larenas dia hoy izy:
Miarahaba anao, mahafinaritra ny manana an'ity fahombiazana mitohy ity izay manome torolàlana ho an'ny fiarahamonina Linux iray manontolo sy fahalalana vaovao hananana fiarahamonina afaka. Lozisialy maharitra maharitra !!!!
Valiny tamin'i Rafael Larenas
aioria697 dia hoy izy:
arahabaina amin'ny ora faharoana fanindroany azonao.
Mamaly an'i aioria697
OpenStreetMap dia mila ny fanampianao hanohy tsy miankina